क्यामरुनको भविष्य अन्धकार, डेनमार्क २-१ ले विजयी | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← अष्ट्रेलिया र घाना बराबरी
मनिषाको बिहेको झलक भिडियोमा →
क्यामरुनको भविष्य अन्धकार, डेनमार्क २-१ ले विजयी
Posted on 20/06/2010 by जय आले | टिप्पणी छोड्नुहोस्
दक्षिण अफ्रीकामा जारी विश्वकप फुटबल २०१० अन्तर्गत १९ जुनमा भएको डेनमार्क र क्यामरुनबीच भएको खेलमा डेनमार्कले क्यामरुनलाई २-१ ले हराएको छ । यो सँगै पहिलो नेदरल्याण्ड्ससँग हारेको डेनमार्कले तीन अंक जोडी दोस्रो चरणमा जाने आशा जिवितै राखेको छ ।
यसअघि जापानसँग पराजित क्यामरुनले भने हारसँगै दोस्रो चरणमा जाने सम्भावनालाई झिनो बनाएको छ । क्यामरुनले अहिलेसम्म अंक जोड्न सकेको छैन । खेलको सुरुमा निकै आक्रमक रहेको क्यामरुनका लागि खेलको १०औं मिनेटमा ९ नं. जर्सीका फरवार्ड श्याम्युल इटोले गोल गरेर अग्रता दिलाए तर त्यो अग्रता २३ मिनेटमै सिमीत रहृयो । खेलको ३३ औं मिनेटमा डेनमार्कका ११ नं. जर्सीका फरवार्ड निक्लास बेन्डट्नरले गोल गरेर हौसिएको क्यामरुनलाई दुःखी बनाईदिए । उनी अहिले आर्सनलमा आबद्ध छन् ।
त्यसपछि खेलेको ६१ औं मिनेटमा डेनमार्कले क्यामरुनलाई अर्को गोल चखायो । जर्सी नं.१९ का डेनमार्कको फरवार्ड डेनिस रोम्मेडल्हले अर्को गोल गरे डेनमार्कलाई अग्रता दिलाए । त्यसपछि दुवैको तर्फबाट कुनै गोल हुनसकेन । अन्ततः खेल डेनमार्कले जित्यो ।
दक्षिण अफ्रीकाको प्रीटोरियास्थित लोफ्टस भर्सफेल्ड स्टेडियममा भएको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक थियो । खेल अवधिभर क्यामरुनले निकै राम्रो प्रदर्शन गरे पनि एक भन्दा बढी गोल गर्न सकेन । क्यामरुनले डेनमार्कको पोष्टमा निकै पल्ट प्रहार गरे पनि एक भन्दाबढी गोलमा परिणत हुन सकने । खेलमा क्यामरुनका क्याप्टेन तथा फरवार्ड जर्सी नं.९ का श्याम्युल इटोले निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए ।
अब क्यामरुनले नेदरल्याण्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने डेनमार्कले एसियान पावर हाउस मानिने जापानको सामना गर्नेछ । क्यामरुन र डेनमार्कले बराबर दुई पहेलो कार्ड पाए ।
म्यान अफ दी म्याच डेनमार्कका डेनमार्कका डिफेन्डर डेनेइल अगेर म्यान अफ दी म्याच भए ।